May 19, 2018 – Hoyga Barashada & Faafinta Diinta Islaamka, Kaalmaynta Dadka Raba inay Cilmiga diiniga ah Bartaan
Dhiga sanka ka yimid ama nabar, soonka ma jabinayaa?
Su’aal: Haduu qofku soomanyahay oo uu dakhramo kadibna dhiig ka yimaado soonku miyuu jabayaa? Jawaab: Wax dhib ah malaha Dhiiga ku yimaada nabar ama dakhar yar oo soo gaadhay qofka sooman, marka laga reebo Istoobista. Wuxuu dhahay Shiikh ibnu baaz (A.H.U): لا يضره نزول الدم، إلا الحجامة إذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة وفيها خلاف بين... Continue Reading →
Anigoo soman ma qubaysan kara ama ma dabalan karaa?
Ta koowaad: Dabaasha waxaan u kala qaadaynaa laba qeybood; qeyb waxa weeye hadii aad dabaalanayso oo aan biyuhu gaadhaynin calooshaada ama aanad biyo liqaynin oo aad garanayso dabaasha, wax dhib ah malaha inaad dabaalato waxyna qaadanaysaa xukunka qubeyska ee bisha Ramadaan. Ruuxa soomanina inuu qubaysto wax dhib ah malaha, waxayna culumadu u daliishadaa xadiiska uu warinayo Bukhaari (1825 )... Continue Reading →